Ibhodi yePVC eyandisiweyo eyi-10mm
I-10mm eyandisiweyo yebhodi ye-PVC ikwabizwa ngokuba yibhodi emhlophe ye-PVC ebhodini kunye nefenitshala yebhodi ye-foam ye-PVC, enye yebhodi ye-foam ye-PVC okanye iphepha le-foam le-PVC. Ibhodi yegwebu ye-PVC Celuka luhlobo olutsha lwezinto zokwakha zeekhemikhali ezinesakhiwo esifanayo se-PVC eyenziwe nge-PVC (i-polyvinyl chloride) njengeyona nto iphambili ekrwada, izongezo zemichiza, kunye nomgca wemveliso ye-extrusion.
Ukwandiswa kwephepha lePVC
Ibhodi ye-foam ye-PVC eyandisiweyo yiphepha elinobunzima, eliqinileyo le-PVC elisetyenziselwa izinto ezahlukeneyo kubandakanya imiqondiso kunye nemiboniso, iindawo zokuhlala, ukufakwa kweefoto, uyilo lwangaphakathi, i-thermoforming, iiprototypes, ukwenziwa kwemodeli, nokunye okuninzi. Inokuchecwa ngokulula, isitampu, inqindi, ukusika, ukusika isanti, ukubola, ukujija, ukubethelelwa, ukubethelelwa okanye ukudityaniswa kusetyenziswa izinto zokubambelela zePVC.
Iphepha le-10mm le-Forex
Iphepha le-15mm le-Forex licwecwe elimhlophe, elandisiweyo elincinci le-PVC elinomgangatho weseli ococekileyo kunye nofanayo kunye nomgangatho we-mat. Iphepha le-Forex linezona zinto zilungileyo zoomatshini kunye nomgangatho ophezulu womphezulu webanga. Isakhiwo esicocekileyo, esivaliweyo, esine-homogenous kunye nomphezulu ogudileyo, o-silky wenza iphepha lebhodi ye-pvc izinto ezifanelekileyo ezikumgangatho ophezulu, ngaphakathi nangaphandle kwezicelo.
Ibhodi yegwebu ye-10mm ye-PVC
I-10mm pvc celuka foam board isetyenziswa ngokubanzi kuMzi-mveliso wefanitshala, kwintengiso nakwizicelo zangaphakathi nangaphandle. Ezi bhodi ze-PVC zenzalo zintsha zenziwe kusetyenziswa ubunzima bokukhanya obunobunzima obunobumba obuninzi obunemveliso e-Eco-Friendly Retardant, Water & Moister Proof, Termite & Pest Proof, Corrosion & Chemical Resistant.
Umgangatho ophezulu webhodi yeSintra PVC
Ibhodi edibeneyo yeplastiki luhlobo olutsha lwezinto ezidibeneyo eziphuhliswayo kwiminyaka yakutshanje ekhaya nakwamanye amazwe
Ngaphezulu kwe-35 %- iipesenti ezingama-70 zomgubo weenkuni, ikhetshi yelayisi, umququ kunye nezinye iintsinga zezityalo zenkunkuma zixutywe kwizixhobo ezitsha zomthi, zaze emva koko zaxutywa, zabumba, ngenaliti ebunjiweyo kunye nezinye iitekhnoloji zokulungisa zeplastiki zisetyenziselwa ukuvelisa iipleyiti okanye iiprofayili. Ikakhulu esetyenziselwa izinto zokwakha, ifanitshala, izinto zokupakisha kunye namanye amashishini. Ibizwa ngokuba yibhodi edityanisiweyo yeplastiki eyenziwe ngomthi ukuba iplastikhi kunye nomgubo wokhuni zixutywe kumlinganiso othile emva koko zenziwe nge-extrusion eshushu.
Iibhodi zeWPC Inokusebenza ngokuthe ngqo ngenxa yokuqaqamba okumiselweyo kunye nobuchwephesha bokuqinisa iipropathi zomphezulu xa kuthelekiswa noxinzelelo oluphezulu laminate. Iibhodi ze-WPC ze-foam zinokuprintwa ngokuthe ngqo kunye ne-UV egubungele ubuhle bomphezulu. Unyango lwe-UV kumphezulu lubonelela ngobomi obude xa kuthelekiswa ne-HPL camera camera yePlywood, MDF & Particle board.
Eco-friendly iinkuni elaminethiweyo PVC amagwebu zeplastiki sheets WPC ibhodi amagwebu ngenxa iikhabhathi zefanitshala
I-WPC Sintra Sheet yePlastiki, ekwabizwa ngokuba yibhodi yeplastiki yePlanga, lolunye udidi lwebhodi ye-PVC yebhodi. Ibhodi yegwebu ye-WPC iveliswa nge-PVC resin kunye nomgubo weenkuni oxutywe kumyinge othile, wongezwa ngezongezo ezizodwa ngefomula ephambili, eyenziwe ngegwebu kunye nokukhutshelwa kubushushu obuphezulu ekugqibeleni ukwenza ifom.
China umenzi pvc iinkuni sheet zeplastiki wpc ibhodi amagwebu ngenxa nekhitshi lokuhlambela nekhabhathi
Iphepha leplastiki leenkuni wpc amagwebu Ibhodi iikhabhathi zasekhitshini zangasese
Ibhodi edibeneyo yeplastiki luhlobo olutsha lwezinto ezidityanisiweyo eziphuhliswayo kwiminyaka yakutshanje ekhaya nakwamanye amazwe.
Iphepha elimnyama le-PVC 5mm luhlobo lwebhodi yegwebu ye-WPC. Ibhodi yeplastiki yeplanga luhlobo lomthi (iselulosi yomthi, iselulosi yesityalo) njengezinto ezisisiseko, izinto zepolymmmer zeplastikhi (iplastikhi) kunye nezinto zokulungisa, njl., Kwaye emva koko uzixube ngokulinganayo. I-high-tech eluhlaza kunye nokusingqongileyo-inobuhlobo izinto ezintsha zokuhombisa ezenziwe ngobushushu kunye ne-extrusion yokubumba kwezixhobo zokubumba ezineempawu kunye neempawu zomthi kunye neplastiki. Luhlobo olutsha lwezinto ezidityanisiweyo ezinokuthi zithathe indawo yeplanga kunye neplastiki.